राजनीतिमा सेलिब्रेटीः आउँछन् त रवि लामिछाने राजनीतिमा ? डम्बर खतिवडा - Baikalpikkhabar
राजनीतिमा सेलिब्रेटीः आउँछन् त रवि लामिछाने राजनीतिमा ? डम्बर खतिवडा
करिब १ वर्षयता मसंग टेलिभिजन छैन । मेरा लागि टेलिभिजनको युग ‘फेज आउट’ भएको छ । बिहानै छोरीहरु स्कुलरकलेज जान्छन् । साँझ मात्र आउँछन् । श्रीमति आफ्नै काममा निस्किन्छिन् । मेरो आफ्नै प्रकारको समय व्यस्तता हुन्छ । साँझ भेला भएर खाना खाँदानखाँदै अबेर हुन्छ । त्यसपछि सबै आ(आफ्नो मोबाइल र नेटमा व्यस्त । टेलिभिजन किन र कस्का लागि चाहियो ? तसर्थ, भएको टेलिभिजन सेट पनि फोहोर उठाउने मजदुरलाई दिइ पठाए
कतिपयलाई यो कुरा पूर्वाग्रहजस्तो लाग्न सक्छ कि जनता यतिखेर सर्वा्धिक निराश छन् । विशेषतः सत्तारुढ दलका साथीहरुले त्यस्तो ठान्लान् । यस्को अर्थ यो हैन कि आजको कम्युनिष्ट सरकारभन्दा हिजोका राणा, शाह, पञ्च र कांग्रेसको सरकार राम्रा थिए । ती सरकार पनि खासै प्रभावकारी र राम्रा थिएनन् । तर जनतामा एउटा आशा बाँकी थियो, क्रान्तिको आशा, कुनै दिन क्रान्तिकारीहरु सत्तामा आउलान् र केही गर्लान् भन्ने आशा थियो । त्यो आशाले मास फ्रस्टेशन हुन दिँदैनथ्यो । अब त त्यो पनि रहेन ।
एकातिर सरकार लगानी सम्मेलन गर्दैछ, अर्को्तिर वैदेशिक लगानी घट्दो छ । बजार मूल्य आकासिदो छ । एक छाक तरकारी किन्दा सय चोटी सरकारलाई सराप्ने मनोदशामा उपभोक्ता छन् । भ्रष्टाचारको कुनै सीमा छैन । एनसेल, बुढीगण्डकी, वाइडबडीजस्ता सबै ठूला कमिसनकाण्ड सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलोमतोमा गुमसुम पारिएको छ । अख्तियार राजनीतिक भ्रष्टाचारमा हात नहाल्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । सायद आयुक्तहरु महाअभियोगको डरले छुलछुल छन् ।
चौथो– नेपाली मतदाताको मनोविज्ञान बढो विचित्रको छ । उनीहरु अरु दिन पुराना नेतालाई गाली गर्छन् । चुनावको एक दिन फेरि तिनै नेता र पार्टीलाई भोट हाल्छन् । विगत ३ दशकदेखि यही दोहोरिरहेको छ । यसो हुनुको गहिरो सामाजिकरमनोवैज्ञानिक कारण छ । नेपालमा विशेषतः कांग्रेस–कम्युनिष्टको बलियो नेटवर्क छ । मतदाता मातृपार्टी भावनामा संस्कारित छन् । एजेण्डामा भोट दिने मतदाताको चेतना निर्माण भएकै छैन । जब चुनाव आउँछ, आमाबुबा, काकाकाकी, मामामाइजु, साथीभाइले नयाँ र स्वतन्त्र मतदातालाई च्याप्दै लग्छन् । ‘अरु बेला जे गर, तर भोट चाहिँ मेरो पार्टी र उम्मेद्वारलाई दे’ भनेर नयाँ पुस्तालाई पुरानाले चौखुर्‍याउँछन् । यो मनोवृति तोड्न धेरैलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ, त्यो रविका लागि पनि सहज हुने छैन ।
पाँचौ– नेपाल ठिमाहा संसदीय शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली कायम भएको देश हो । देशमा नयाँ नेतृत्व जन्मिन प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी चाहिन्छ । त्यो प्रणालीमा एउटा व्यक्तिको लोकप्रियताले पनि धेरै ठूलो काम गर्दछ । तर संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे फरकफरक समीकरण र व्यक्तित्वहरु हुन्छन् । रविले पाटी खोल्ने बित्तिकै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उत्तिकै प्रभावकारी उम्मेद्वार पाउन सम्भव हुँदैन ।
शुक्रबार, १३ भदौ, २०७६, दिउँसोको १२:२७ बजे